300kg ပူပြင်းသည့်လေအေးပေးစက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ရေခဲမုန့် Carot Chilli Tomatto Broccoli-DPHG050s-G ထုတ်လုပ်သူများ - ဆ t | Twesix
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခန်းခြောက်ခြင်း, လေကိုအပူ ပေး. ပူသောလေထုကိုခြောက်သွေ့စေရန်အပူချိန်, အပူချိန် 30-80 ℃။
ပူပြင်းတဲ့အခြောက်ခံစက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးခန်းခြောက်။ ရေခန်းခြောက်သောမုန်လာဥနီ။ ရေခန်းခြောက် broccoli ။ ငရုတ်ကောင်းငရုတ်ကောင်းခြောက်သွေ့။
Twesix China 300 ကီလိုဂရမ်ပူပြင်းသည့်လေထုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက် TheMilli Tomatto Broccoli Broccoli Broccoli Broccoli Twesix, Twesix, Copeland Compressor နှင့် Schnelider Electronics Compronents
ပူပြင်းတဲ့လေခြောက်သွေ့စက်ကခြောက်သွေ့တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကခြောက်သွေ့တဲ့အသီးတွေနဲ့ဆင်တူတယ်။ ခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုကိုလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များထက်ကြာကြာထိန်းသိမ်းရန်စီစဉ်ထားသည်။ ပူပြင်းသည့်လေမီးဖိုဖြင့်ကြွယ်ဝသောရေနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ client သည်အပူချိန်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုခြောက်သွေ့စေပြီးခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရသာ, Tsix စက်မှုလုပ်ငန်း Dehydrator များသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုအပြည့်အဝခြောက်သွေ့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ မုန်လာဥ, ခရမ်းချဉ်သီး, ငရုတ်သီး, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကဲ့သို့။
ပူပြင်းတဲ့လေကိုအပူပေးစက်ကိုအပူပေးစက်ကိုအပူပေးပါ ခန်းခြောက်ခန်း panel ကို ( polyurethane မြှုပ်)
Fan Wall (ပန်ကာသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် anticororrosion ကိုစွန်းနိုင်သည်) 2012 ခုနှစ် 304 သံမဏိ trolley
ခြောက်သွေ့သောစက်တွင်အသုံးပြုသောကွက်လပ် silicon ဖျာသည်ဗန်းသို့ကပ်ထားသည့်အသီးသို့မဟုတ်အသားများကိုကာကွယ်ရန်
ဟုတ်ကဲ့, သင့်တွင်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်နှင့်ပန်ကာနံရံများနှင့်အတူငါတို့ထံမှဝယ်ယူပါ
ဟုတ်ပါတယ်, ခြောက်သွေ့တဲ့အခန်းကိုအုတ်တွေ, ရော့ခ်အမြစ် Polyurethane မြှုပ်နှံ panel.before နေရာချထားပါ။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတည်ပြုပါ
1. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်0န်ဆောင်မှုအပြီး
2. အပ်ပါ, OEM / ODM အမှာစာများလုပ်ပါ